Shiinaha PALLET&BaSKET/ Dhalo&Khasacad-Dhaqidda Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |INCHOI
◆Qalabku waa SUS304 oo ah bir aan daahin.waafaqsan shuruudaha shahaadada GMP/HACCP.
◆ Lagu naqshadeeyay buufin biyaha & kuleylinta & nidaamka qalalan si loo gaaro saameynta nadiifinta ugu habboon.
◆ Heerkulka waa la hagaajin karaa oo si toos ah ayaa loo xakameeyaa.
◆Naqshadda qoyaanka gaarka ah waxay buuxin kartaa shuruudaha nadiifinta cabbirrada dambiisha ee hal qalab.
◆Aqbal nidaaminta xawaaraha beddelka soo noqnoqda, yarayso xoogga shaqada, wanaaji waxtarka wax soo saarka iyo nolosha adeeg dheer.
◆ Dusha sare waa la qallajin karaa oo la duban karaa.
Makiinada cusub ee lagu dhaqo dambiisha oo ay si madax banaan u soo saartay oo ay soo saartay shirkadeena ayaa ah mid ay dib u heleen macmiishii hore iyo kuwa cusub tan iyo markii lagu soo bandhigay suuqa, badeecadan waxa loo dhoofiyay in ka badan toban wadan oo leh waxqabad wanaagsan iyo hawlkarnimo sare. kaaliyaha cusub ee isku xirka warshadaynta cuntada.
1.Qaybta gudbinta ee mishiinka ayaa ka samaysan SUS304 birta aan lahayn, acid-caddayn, hawlgal xasilloon, nolol adeeg oo dheer, ma jirto wasakh sare..
2. Qaybta wadista waxay qabataa xawaaraha elektarooniga ah ee xakameynaya mootada, xawaaraha orodka waxaa lagu hagaajin karaa beddelka soo noqnoqda.
3.Four nadiifinta, biyaha ayaa dib loo warshadeyn karaa, keydinta tamarta iyo biyaha.Qeyb kasta waxaa lagu qalabeeyaa shaandhooyin badan oo lakabyo ah si looga hortago xannibaadda sanbabada. Iyada oo qalabka xakamaynta biyaha si toos ah, haddii ay dhacdo in bamka biyuhu uu waxyeello u geysto biyo la'aan.
4.Mashiinka oo dhan wuxuu qaataa tayada sare ee tayada tayada sare leh.
5. Dambiil-wareejintu waxay gaadhaysaa saamaynta nadiifinta wax ku oolka ah, waxay yaraynaysaa kharashka shaqada, waxay yaraynaysaa xoojinta shaqada, waxqabadka waaxda farsamada waa mid deggan, waxtarkeeduna waa sare.
Weeraha weelkaWaxaa loo isticmaalaa nadiifinta iyo jeermiska ee dambiisha wareegta, suxuunta, saxaarada ukunta, caaryada iwm. Ka dib markii la nadiifiyo weelka waxa uu leeyahay tiro ka mid ah gumeysi waafaqsan shuruudaha badbaadada cuntada qaranka. .Waxay noqon kartaa si toos ah loogu dhaqo , oo waxa ay leedahay heerka guuldarada hoose, waxqabadka xasilloon. warshadaha cuntada degdega ah, warshadaha khudaarta iyo miraha warshadaha biyaha iyo warshadaha kale.
Sida mashiinku u shaqeeyo
Habka nadiifinta afarta marxaladood waa la qaatay,
Marxaladda ugu horreysa waa nadiifinta qulqulka sarreeya, taas oo u dhiganta habka qoynta ee habka nadiifinta dhaqameed. Ku-xidhka dusha sare ee sanduuqa wareejinta waa xumbo oo jilicsan, taas oo aad ugu habboon nadiifinta xiga;
Marxaladda labaad waa dhaqid cadaadis sarreeya, kaas oo ka soo saara walxaha ku dhejisan dusha sare ee dambiisha dib u noqoshada cadaadis sare si loo xaqiijiyo ujeedada nadiifinta wasakhda.
Marxaladda saddexaad waa ku luqluqashada biyo nadiif ah, iyo ku luqluqashada dusha sare ee dambiisha wareegta ah oo leh biyo wareeg ah oo nadiif ah.Sababtoo ah biyaha ku jira labada taangi ee ugu horreeya waxay noqon doonaan kuwo wasakh ah ka dib marka dib loo warshadeeyo, dareeraha nadiifinta ee soo haray ee labada marxaladood ee hore waxaa lagu raaci doonaa biyo nadiif ah.
Marxaladda afraad waa nadiifinta, ka dibna si fiican u raaci biyo nadiif ah si aad u nadiifiso dusha sanduuqa iyada oo aan hadhaaga lahayn.
wax soo saarka (hal/8 saac)
Hore: PASTEURIZATION/XINKA QABOWEYNTA
Xiga: QINKA QALABKA OO JOOGTADA AH
Mashiinka Dhaqaale ee Xawaaraha Sare ee Tooska ah
Mashiinka dhaqida saxarada Tooska ah
Mashiinka dhaqida suufka caaga ah
Makiinada dharka lagu dhaqdo oo leh Basket